बिरामी भर्ना नगर्ने अस्पतालहरूलाइ कारवाही गर्ने विप्लवकाे चेतावनी!! (बिज्ञप्ति सहित) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Thoughts/बिरामी भर्ना नगर्ने अस्पतालहरूलाइ कारवाही गर्ने विप्लवकाे चेतावनी!! (बिज्ञप्ति सहित)
बिरामी भर्ना नगर्ने अस्पतालहरूलाइ कारवाही गर्ने विप्लवकाे चेतावनी!! (बिज्ञप्ति सहित)
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्कटको बेलामा सर्वसाधारणको उपचार नगरी भाग्ने निजी अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने भएको छ । त्यसैगरी नेकपाले को’रो’नाका कारण देश लकडाउन भएको अवस्थामा भ्र’ष्टाचार गर्ने र का’लोबजारी गर्नेहरूलाई पनि का’रबाही गर्ने जनाएको छ । नेकपा अर्घा खाँचीका सेक्रेटरी खेम घर्तीले मङ्गलबार अबेर विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सेक्रेटरी खेमको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यति बेला मानव जातिको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने गरी CORONA VIRUS(COVID-19) को रोकथामका लागि देश नै लकडाउन गरिएको छ । तर सरकारले आवश्यक तयारी भने गर्न सकेको छैन । सरकारले श्रमजीवीहरूका लागि कुनै पनि ठोस किसिमका राहतका कार्यक्रम ल्याएको छैन । जिल्लामा हजारौँ सङ्ख्यामा ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीविका चलाउनेहरूको दैनिकी लकडाउनका कारण कठिन बनेको छ । उनीहरूका लागि स्थानीय निकायले राहत उपलब्ध गराउन कुनै पनि पहल नथाल्नु दुःखद् पक्ष हो ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘दिनभर ज्यालादारी गरेर बिहान–बेलुकाको छाक टार्नेहरूका लागि स्थानीय निकायलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्घाखाँची अनुरोध गर्दछ । त्यस्तै लकडाउनको मौका पारेर का’लोबजारी गर्ने र त’स्करी गर्नेहरूलाई कार’बाही गर्न पनि माग गर्दछौँ । त्यस्तै सहज परिस्थितिमा चर्को रकम असुलेर उपचार गर्ने तर मुलुक स’ङ्कटमा परेको बेला अस्पताल नै बन्द गरेर भाग्ने निजी अस्पतालहरूलाई सहज रूपमा उपचार गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा चे’तावनीको भाषामा भनिएको छ, ‘त्यस्ता जनविरोधी निजी अस्पतालहरूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनकारबाही गर्ने जानकारी गराउँछौँ ।’ कोरोनाको बिरामाको आशंकामा निजि अस्पतालहरुले ज्वरोको बिरामी लाई भर्ना समेत लिने गरेका छैनन् ।
बसन्त चौधरी भन्छन-‘नेताले भ्रष्टा चार गरेको प्रमाण म दिन्छु, तर मैले देश छोड्नु पर्ने हुन सक्छ !’
विद्युतभार कटौतीको अन्त्य ओली र पुनकै योजनामा भएको हो : कुलमान घिसिङ